Mandrahona hanao fitokonana : 30 ireo “internes” mararin’ny pesta, tsy ampy ny fitaovana | NewsMada
Mandrahona hanao fitokonana : 30 ireo “internes” mararin’ny pesta, tsy ampy ny fitaovana
Par Taratra sur 24/10/2017
Milaza ny tsy handray ny raharaha momba ny aretina pesta intsony ireo mpianatra ho dokotera mandray raharaha eny anivon’ny hopitaly raha tsy vonona ny fitaovana ahafahan’izy ireo miaro tena. Nanampy tamin’ny fitsaboana ny aretina pesta izy ireo efa ho roa volana izao. Tsy ampy anefa ny fitaovana fa lamba manify ambonin’ny fanamiana maha dokotera sy tampim-bava ihany no anaovana mandritra ny fikarakarana ny marary.
Vokany, efa 30 ireo mpianatra dokotera mararin’ny pesta ary manaraka fitsaboana amin’izao fotoana izao.
Mahatsiaro ho ankilabao ireo mpianatra dokotera ireto kanefa anisan’ny mandray anjara betsaka amin’ny fitsaboana ny marary ary mampihodina ny hopitaly ka izao manao fitokonana izao.
Tsy ampy ny sarom-bava ka lasa ampiasaina mandritra ny 24 ora raha tokony hisolo isaky ny ora roa. Tsy ampy ny fonon-tanana ary zara raha mirakotra ny vatana ka anjakan’ny mikraoba mivantana ny akanjo anaovana.
Mila vonona 48 ora mialoha ny handraisana ny raharaham-pitsaboana ny fitaovana toy ny sarom-bava izay mila misolo matetika, akanjo fotsy manarona ny vatana manontolo, fonon-tanana…
Anton’ny fitokonan’ny mpianatra dokotera “interne” ihany koa ny tsy nahazoan’izy ireo ny tambin-karamany. Nilaza anefa ny minisitra fa efa nanomboka omaly izany fizarana ny tambin-karaman’izy ireo izany. Nisy ny pitsopitsony tamin’ny fandaminana ny antontan-taratasy tsy maintsy nalamina ka anton’ny fahatarana izany raha ny fanazavan’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka hatrany.